Kushaya Kuburitswa kwaAngi Roofing uye Kupesana Kwekufarira Kunofanira Kukwevera Kutarisisa | Martech Zone
Vaverengi vezvinyorwa zvangu vangangoona kuti takabatsira makambani akawanda ematenga ematenga kuvaka kuvepo kwavo pamhepo, kukura kutsvaga kwavo kwenzvimbo, uye kutyaira mabhizinesi avo. Iwe unogona zvakare kurangarira kuti Angi (yaimbova Angie's Rondedzero) aive mutengi akakosha watakabatsira nekutsvaga kwavo injini optimization mudunhu. Kare ikako, chinangwa chebhizinesi chaive kutyaira vatengi kuti vashandise sisitimu yavo kutaura, kuongorora, kana kutsvaga masevhisi. Ndaiva neruremekedzo rukuru kune bhizinesi nevakatanga - uye takavabatsira zvikuru kukura bhizinesi ravo.
Kweanopfuura makore 18, Angie's List yakanga isati yamboratidza purofiti yegore negore, uye vaongorori vaifunga kuti kukosheswa kwekambani kwakanga kusiri kwechokwadi. Muna 2017, Angi akatama kubva kubhizinesi rekunyorera mutengi kuenda kune inotungamira-chizvarwa kumakambani akanyorwa muongororo yavo. Muna 2021, vakachinja, vakavandudza webhusaiti yavo, uye vakatanga chirongwa chitsva vachitarisira kupinda muindasitiri yebasa repamba zvakare. Pane kupokana kushoma kuti pakanga paine mukana wakawanda wemari pakugadzira kutungamira kupfuura mubhizinesi rekubhadhara mubhadharo iro rakasimudza mhando yaAngi zvakanyanya.
Asi ndinotenda kuti vakangoenda kure.
Dambudziko Riri Kukura Nekunyepera Kutungamira
Imwe yenzvimbo yangu Indianapolis padenga anoshandisa chitsama chemari nechibvumirano chegore negore naAngi kutyaira anotungamira kubhizinesi rake. Ndanga ndichishanda naBob nebhizinesi rake remhuri kwemakore uye aive shamwari yakanaka kunyangwe izvi zvisati zvaitika. Munguva ichangopfuura, Bob akacherechedza kuti akanga achiwedzera fake lead kuburikidza neAngi… uye iyo yakanaka inotungamira ine mabasa makuru yakatanga kudzikira. Ini handisi kuzoburitsa kuzvipira kwaBob pamwedzi kuna Angi, asi ndinogona kukuudza kuti chibvumirano chakakura. Mumwedzi mitatu, akagamuchira 72 manyepo ekutungamira - mumwe nemumwe achibvisa pfungwa kubva kubhizinesi rake.
Bob akatanga kutaura neni zvakanyanya pamusoro pazvo uye akaedza kunyunyuta kuna Angi… asi zvichemo zvake hazvina kunzwika. Akaona kuti vamiriri vake vakatanga kutendeuka kakawanda zvakare, zvichiwedzera kushushikana kwake. Zvese izvi panguva iyo denga nemikana yekugezera yaikwira mudenga nemasevhisi epamba ane chekuita nedenda.
Angi Business Zvichemo
Angie's List yakavakirwa pashoko-re-muromo pakati peIndiana uye yaive mhando inodiwa nemhuri dzaiishandisa kuhaya mabhizinesi emuno. Ndakasangana nebhodhi kakawanda uye vakanyatsonzwisisa zvavaitengesa veruzhinji kuvimba… nyaya hombe muindasitiri yemabasa epamba.
Muchokwadi, ini ndaive nechibvumirano chakakosha naAngie's Rondedzero vasati vaenda kuruzhinji kungoita forensics pabasa ravakange vaitirwa nefemu kuti vaone kuti zvese zviri kumusoro uye kumusoro. Vatungamiriri vekambani yavo vaisaisa panjodzi chero chinhu chingasvibisa zita ravo kana kuisa vatengi vavo panjodzi.
Ini handichatendi kuti ndiko kunangana nesangano. Uye ine simba rinoshamisa.
Muchokwadi, muna Kukadzi we2022, iyo Better Business Bureau yakadzora kubvumidzwa kwaAngi nekuda kwekutadza kwebhizinesi kutevedzera zvinodiwa neBBB izvo Mabhizinesi Akabvumidzwa anosangana uye nekutevedzera mamwe maitiro.
Yekupedzisira Huswa: Angi Roofing
Ndiani ari yakanyanya kuongororwa denga rekontrakta nemhinduro huru paAngi mune dzimwe nzvimbo dzenzvimbo? Unogona kushamisika kuziva kuti ndizvo Angi Roofing.
Sezvo Bob aiburitsa makotesheni uye kusangana nevaigona kuve vatengi, fungidzira kushamisika kwake kuona kuti kambani yaaibhadhara inotungamira yaive mumakwikwi akananga naye. Ndizvozvo… Angi aitora makambani anotungamira ekupfirira denga mune dzimwe nzvimbo uye achityaira anotungamira akananga mukambani yavo.
Maererano ne The Motley Fool, izvi zvakatanga gore rakapera.
Hanrahan akataura kuti bhizinesi, iro rava kunzi Angi Roofing, riri kukura nekukurumidza, rave kuwanikwa mumisika ingangoita gumi nemaviri, uye munguva pfupi iri kuuya mune mamwe mashanu. Roofing ine huzhinji hwehunhu hunoshanda mukufarira kwekambani muchikamu, kusanganisira yakakwira avhareji yekurongeka kukosha uye musika mukuru unogadziriswa, waanofungidzira pamadhora 50 bhiriyoni.
Kutaura kuti mutengi wangu ari kupenga kungangove kushomeka. Angi haana kumbotaura naye uye akamuudza nezvekutora, haana kumbomuudza kuti vaityaira vanotungamira kune bhizinesi ravo, uye haana kumbomuudza kuti angangodaro achiwana zvakasara. Bob akateedzera gweta uye ari kutarisira kubuda muchibvumirano chake naAngi.
Tsvaga mune mamwe maguta ari pakati pemadokero paGoogle Mepu uye uchaona kuti Angi ari kutanga kutora mapepa epamepu uye kusimudzira. Angi Roofing. Uye, hongu, ivo vari kusimudzira mabhizinesi aya seayo yakanyanya kuongororwa denga rekontrakta kunze uko… zvakanaka duh… ndosaka waatenga.
Iyo Federal Trade Commission iripi?
Kutarisa nekukurumidza paAngi saiti uye iwe hauwane chero kuburitsa pachena yehukama hwemari uhu. Dai ndanga ndiine hukama hwedenderedzwa pandairatidza kuvatengi ndaiva munhu akavimbika anopesvedzera achipa akazvimirira ongororo yemabhizinesi… asi ndanga ndisiri kubuda pachena kuti ndaityaira mari yese muhomwe yangu, ndaizofunga kuti kunyengera uye kunopa ongororo. .
Iwe hauwane chero kuburitswa kwakadaro pane Angi peji remba kana yavo Roofer search:
Saka mukuru wenyika pamabasa epamba haasi kuburitsa pachena kune vatengi kuti iri kutyaira inotungamira kune bhizinesi ravo, kwete kuburitsa kune vatengi vebhizinesi ravo kuti havasi kukwikwidza navo, uye hapana ari kubvunza izvi?
Asi Zviri pamutemo Here?
Handisi kutaura kuti Angi pane chaaita zvisiri pamutemo pano. Ndiri kungounza izvi kune wese munhu uye ndinotenda vezvenhau neFTC vanofanirwa kutarisa zvakadzama pane izvi. Pamusoro payo, ipfungwa yangu kuti uku kushambadza kunonyengera. Zvirinani, ndinotenda kushaikwa kwekuburitsa kunoratidza kusanzwisisa kwakanyanya nekambani.
Handina kumbovimba a wongororo saiti kwandinotenda kuti ndiri kuwana yakazvimiririra sosi kurudziro - kuti ndizive kuti yakakurudzirwa kambani Angi pachayo. Uye semupi webasa, handifi ndakabhadhara maredhiyo kubva kune wangu wandinokwikwidza!
Tags: angi reviewsangi roofingangi roofing cincinnatiangi roofing indianapolisangieChinyorwa chaAngiebbbftc kuburitsamabasa epambamutungamiri wechizvarwaReviewskuvimbawongororo dzinovimbwa
Douglas Karr Monday, June 20, 2022 Monday, June 20, 2022
Compass: Kutengesa Kugonesa Zvishandiso Kutengesa Pay Per Click Kushambadzira Services
Zvidzidzo Zvishanu Zvakadzidzwa Kubva Kupfuura Mamirioni makumi matatu Mumwe-kune-Mumwe Mutengi Kudyidzana muna 5.
Jun 20, 2022 pa 6: 35 PM
Wow! Kupenga ikoko! Ndirwo rwendo rwakaitwa kubva pamazuva ekutanga e "Angie" kusvika kune yazvino bhizinesi maitiro e "Angi". Kunyangwe zvisina kufanana, zvinondiyeuchidza nezve mamwe maitiro ebhizinesi kubva kuAmazon. Kuwedzera kwavo kusangova mupi we “musika” wemakambani asi kuti vavewo mutengesi wezvigadzirwa zvavo pamusika zvavari kutonga zvizere hazvina kumbobvira zvaita sendima yekutamba neimwe nzira kana fungidziro yaungafungidzira uri wega.